पिनासले सताएमा के गर्ने ? – Online Bichar
पिनासले सताएमा के गर्ने ?
Online Bichar 10th January, 2020, Friday 11:55 PM
काठ्माडौं, २५ पुष । जाडोको मौसम छ । यो मौसममा रुघाखोकीले त सताउँछ नै, त्यो सँगसँगै पिनासले पनि अत्यधिक सताउने गर्छ । पिनासले सताएपछि थुप्रै समस्याहरु साथसाथै आउने गर्छ । आँखा चर्कोसँग दुख्ने, नाकको डाँडी दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्याहरुले जीवन नै अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ ।
पिनासको बारेमा र त्यसबाट राहत पाउने उपायहरुका बारेमा केही चर्चा गरौं ।
पिनासलाई अंग्रेजी भाषामा साइनासाइटिस भनिन्छ । हाम्रो नाकको नरम हड्डीको दुवैतर्फ एउटा एउटा खाली भाग हुने गर्छ, जसलाई साइनस ९कष्लगकभक० भन्ने गरिन्छ । सामान्य अवस्थामा त्यो भाग हावाले भरिएको हुन्छ । तर कुनै पनि कारणले जब त्यो भागको नरम झिल्ली जस्तो तन्तुमा संक्रमण हुन्छ, तब त्यस अवस्थालाई साइनासाइटिस अर्थात् पिनास भन्ने गरिन्छ ।